musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » SKAL Kusarudza Mutungamiri Wenyika Itsva: Sangana naBurcin Turkkan, muTurkey-America Anokurudzirwa Kutora Dambudziko iri.
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • misangano • nhau • vanhu • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Video
Burcin Turkkan, Mutungamiriri weNyika Mumiriri paSKAL Orlando Kisimusi Party
SKAL ndeyehushamwari pakati pevafambi uye nyanzvi dzekushanya pasirese. Izvo zvakare nezve seti chimiro chepamusoro-soro mharidzo yesangano iri. Mari inomira nemutungamiri wenyika. eTurboNews ari kusangana nemumiriri wega webasa iri, Burcin Turkkan.
SKAL ndeyekuita bhizinesi pakati peshamwari.
Shamwari idzi dziri munyika zana nembiri pasi rose.
Mumwe wekuAmerica/Turkish go-getter ari kuyedza kuwana mavhoti anodiwa makumi mashanu neshanu muzana muna Zvita 55 pamusangano unotevera weSKAL General Assembly svondo rinouya kuti ave mutungamiri wenyika anotevera wesangano repasi rose.
Burcin Turkkan aimbova mutungamiri weSKAL USA uye ari kuyedza kuwana mavhoti kuti ave Mutungamiriri weNyika anotevera wesangano.
Richikurudzirwa neruzivo rwavo uye ushamwari hwakanaka hwemarudzi akawanda hwakavapo munzendo idzi, boka guru renyanzvi raitungamirirwa naJules Mohr, Florimond Volckaert, Hugo Krafft, Pierre Soulié, naGeorges Ithier, vakawana Skål Club muParis musi waDecember 16, 1932.
Pfungwa yehushamwari hwepasi rose pakati peTourism Professionals yakakura, uye pakatanga 1934 pakanga patove ne12 Makirabhu akaumbwa munyika shanu. Ndipo pakabva pamuka pfungwa yekuumba mubatanidzwa, unobatanidza maClub ose, nechinangwa chekusimudzira kugarisana zvakanaka uye hushamwari muchikamu cheTravel and Transport pasi rose.
Iyo 'Association Internationale des Skål Clubs' (AISC) yakavambwa muna Kubvumbi 28, 1934 paHotera Scribe muParis, muGeneral Assembly yakaumbwa nenhume makumi maviri neimwe, vamiriri vezvikwata gumi nerimwe, pamwe nevacherechedzi vaviri kubva kuLondon, avo pamwechete vakasarudza Executive Committee. , pasi pehusachigaro hwaFlorimond Volckaert:
Nhasi kudarika 12923 nhengo, zvinosanganisira Mamaneja neVakuru veindasitiri, vanosangana kuNzvimbo, National, Dunhu uye International nhanho kuita bhizinesi pakati peshamwari kupfuura 318 Skål Makirabhu.
Chikamu chikuru cheSkål International iClub, iyo ichaita semubatsiri weSkål International muzviitiko zveSkål mukati memiganhu yenzvimbo yeClub.
nhasi eTurboNews Breaking News Show yakabatana neSKAL Orlando, Florida kirabhu paSKAL Kisimusi mhemberero ne Burcin Turkkan ari kupinda..
Burcin Turkkan akati:
Shamwari dzangu dzeSkalleagues,
Yanga iri ropafadzo yangu kushanda paSkål International Executive Board seDirector wako uye Mutevedzeri Mukuru weMutungamiri kwemakore maviri apfuura. PaSI AGA iri kuuya musi waZvita 2, 10, na2021 am CET ndakamirira sarudzo kuti ndive Mutungamiriri wenyu anotevera weSkal International World. Senguva dzose ndinotenda rutsigiro rwenyu rwakazara uye kuvimba neni uye ndicharamba ndiri pabasa renyu nguva dzese. Muhushamwari uye Skal.
Zvita 6, 2021 pa09: 33
Yakanaka kwazvo Blog ndakanakidzwa nekuiverenga Ndokumbira Govera Rumwe Ruzivo rwakakodzera kuiverenga uye nhungamiro yehunyanzvi inofanirwa kune ekutanga mabhizinesi kuti iwe ugone kubata nesu !!
Zvita 6, 2021 pa04: 54
Ndinokutendai zvikuru nekusimudzira Skal.
Ungada kusangana newe kuburikidza neSkype kana Zoom!
CETINAY AKSOY anoti:
Zvita 5, 2021 pa15: 58
Ini ndiri nhengo yeIzmir/Turkey SKAL. Zvinoenderana nemirau, hapana chikonzero nei Burçin TÜRKKAN, iye ega mumiriri, asingasarudzwe. Ndinomutsigira nemoyo wese.
Zvita 5, 2021 pa09: 09
Ndinodawo kubvuma. Mutungamiri weSkål International. Kanzuru, Bernard Whewell, anogarawo muDare Repamusoro. Yekupedzisira Chirongwa Kuunza iyo nyowani yekukurumidza kuwana Terminology webhusaiti kubva kuICS Kutsvaga uye kutarisa kuburikidza nematemu ekondinendi uye tsananguro dzawo.